Igagasi lokushisa elinonya e-Australia libulala amalulwane lapho zilele | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - IGN.com
Ngenkathi sisenyakatho Nenkabazwe sisasalelwe okuncane ukuqeda ubusika, E-Australia izihlahla zigcwala amalulwane amakhulu afile. Isizathu?
Ukushisa okunamandla okushiya amazinga okushisa angaphezu kuka-45 degrees Celsius eningizimu-mpumalanga yezwekazi, njengase-Singleton, okungaphezu kwalezi zilwane.
Ilulwane elikhulu lase-Australia noma impungushe endizayo iyingxenye ye-suborder Megachiroptera, eyenziwe ngezinhlobo zamalulwane ezingafinyelela ku-40cm ubude, i-150cm ngamaphiko ubude futhi idlule amakhilogremu ngesisindo. Ukuze usinde, Ziphila ngokudla izithelo noma umpe wezimbali, ngakho-ke zingatholakala njalo ezihlahleni noma eziseduze, lapho bathatha khona ithuba lokuphumula nokuzivikela elangeni.
Nokho, amazinga okushisa aphezulu abhalisiwe e-Australia kulezi zinsuku afaka engcupheni izinhlobo esezisongelwe kakade zelulwane elikhulu lase-Australia, ofa elele. Kukhona eyodwa esala lapho, ilenga egatsheni, ngenxa ye-rigor mortis, enye iwela phansi.
Lesi simo besimangalisa kakhulu ukuthi izithombe namavidiyo ahlukahlukene alayishwe ezinkundleni zokuxhumana. Iziphathimandla zilwela ukususa izidumbu zalezi zilwane ezihlahleni futhi zicele omakhelwane ukuthi bangazithinti, ngoba ziphethe izifo ezithathelana abantu, njengamarabi.
Ukube lokhu bekunganele, impumalanga yezwe ibhekene nelinye lamagagasi omlilo amabi kakhulu emlandweni wakamuva, obeka engcupheni izilwane nezimbali zase-Australia.
Qaphela: Ukuze kungalimazi ukuzwela komfundi, kukhethwe ukuthi kungafaki izithombe zamalulwane afile. Uma kwenzeka ufuna ukubuka ividiyo, unga Chofoza lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Igagasi lokushisa elinonya e-Australia libulala amalulwane lapho zilele
Kubonakala sengathi amalulwane ase-Australia ahlushwa ubunzima bokushisa nokuguquka kwesimo sezulu. Umuntu, onesimo somoya, kubonakala sengathi akafuni ukubona ubunzima balolu daba. Ngakho-ke, sekuqubuke inqwaba "yabaphikayo" yokuguquguquka kwesimo sezulu namuhla, esingafingqa ngayo kulezi zinhlobo ezilandelayo:
1.- Ukuguquka kwesimo sezulu akukho.
2.- Ukuguquka kwesimo sezulu kukhona kepha akubangelwa ngabantu.
3.- Ukushintsha kwesimo sezulu kukhona kepha bakubangela ngokuxhaphaza isimo sezulu ngezimpondo zeHaarp (umbono wozungu)
4. - Ukuguquka kwesimo sezulu kukhona, akunakulungiswa futhi akukho esingakwenza.
Zonke lezi zinhlobo "zokuphika" ziza nomqondo owodwa, okungukuthi "ukuhlala" bese ulinda njengamalulwane ase-Australia abhubha egatsheni futhi angenakwenza lutho ukulwa nokushisa.
Lapho sibhekene nazo zonke lezi zindlela zokungasebenzi, sinomcabango onembile futhi onesibindi, osuselwa esenzweni sezinyathelo ezixhunywe ekunqandeni ukukhishwa kwegesi engcolisa umoya. Ukuxhumana phakathi kwamajika wokukhuphuka kwamazinga okushisa nenani le-C02 elikhishiwe njengoba kunamarekhodi kucacile. Kepha okwamanje kukhona elinye ijika elinethemba lezinhlobo zethu nezinye eziningi. Leli curve alikho okunye ngaphandle kokukhula kwenani kanye nokwenza ngcono ekusebenzeni kwamandla avuselelekayo nezimoto zikagesi. Uma sibheka ijika lentuthuko elenzekayo maqondana nalokhu, ngenxa yokufana kwalo nalokhu okwedlule, singabona ukuthi impilo yanamuhla nokusinda kohlobo lwethu lwezinhlobo zemvelo yiyona «movie esolisayo enkulu kunazo zonke". Angicabangi ukuthi ngidinga ukuya kuma-movie, noma ngifunde incwadi, noma ngiye enkundleni yemidlalo yaseshashalazini. Ukushuba kwesimo sale ndaba kungishaqise ngokuphelele.
I-European Union ihlangene neChina bazohola Isivumelwano SaseParis